गाबापेन्टिन खुराक, फारमहरू, र शक्तिहरू | एकलकेयर - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य समाचार, कल्याण औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण भारी खेल कम्पनी, समाचार समुदाय मनोरञ्जन कम्पनी औषधि जानकारी, समाचार प्रेस
मुख्य >> औषधि जानकारी >> गाबापेन्टिन खुराक, फारमहरू, र शक्तिहरू
गाबापेन्टिन खुराक, फारमहरू, र शक्तिहरू
गाबापेन्टिन फारम र शक्तिहरू | वयस्कहरूको लागि ग्याबापेंटिन | बच्चाहरूको लागि गेबापेंटिन | गाबापेन्टिन खुराक चार्ट | आंशिक दौराको लागि गाबापेंटिन खुराक | पोस्टपेर्टेटिक न्यूरलगियाको लागि गाबापेन्टिन खुराक | न्यूरोपैथिक पीडाको लागि गाबापेन्टिन डोज | फाइब्रोमाइल्जियाको लागि गाबापेन्टिन | रक्सी निर्भरताका लागि गाबापेंटिन | घरपालुवा जनावरहरूको लागि गाबापेन्टिन | कसरी gabapentin लिने | प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
गाबापेन्टिन एक जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो जुन एफडीए-द्वारा अनुमोदित छ मिरगी रोगीहरूमा आंशिक दौराको लागि अन्य औषधीहरूको साथ एक एड-अन उपचारको रूपमा। यो पोस्टहेर्पेटिक न्यूरलगिया (एक जटिलता) बाट स्नायु दुखाइको उपचार गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ दाद )। गाबापेन्टिन प्राय: धेरै अन्य सर्तहरूको लागि अफ-लेबल निर्धारित गरिन्छ, जस्तै मधुमेह परिधीय न्यूरोपैथी, फाइब्रोमायाल्जिया , र रक्सी निर्भरता।
गाबापेन्टिन सामान्यतया जेनेरिकको रूपमा तोकिन्छ, तर औषधि ब्रान्ड नाम अन्तर्गत पनि उपलब्ध छ न्युरोन्टिन र Gralise । केही बिरामीहरूलाई गाबापेंटिनको जस्तै मिल्दोजुल्दो सल्लाह दिन सकिन्छ - जस्तै होरिज्यान्ट (गाबापेंटिन एनकार्बिल) वा लिरिका (प्रेगाबालिन) - गेबापेंटिनको स्थायित्व।
गाबापेंटिनलाई ट्याब्लेट, क्याप्सूल, वा मौखिक तरलको रूपमा लिइन्छ। डोजि treated उपचार भइरहेको अवस्था, उपचार गरिएको व्यक्तिको उमेर र किडनीको कार्यमा निर्भर गर्दछ। मिर्गी को लागी सामान्य खुराक पहिलो दिन 300 मिलीग्राम मा शुरू हुन्छ। त्यसपछि खुराकलाई बढाउन सकिन्छ जबसम्म एक प्रभावकारी खुराक नपुगेसम्म, जुन प्रति दिन times०० देखि m००mg लिन्छ।
सम्बन्धित: Gabapentin के हो? | गाबापेन्टिन कुपनहरू
गाबापेन्टिन खुराक फारम र शक्तिहरू
गाबापेन्टिन ट्याबलेट, क्याप्सूल, वा मौखिक समाधानको रूपमा मुखले लिन्छ।
ट्याब्लेटहरू: प्रति ट्याब्लेट or०० वा mg०० मिलीग्राम
क्याप्सुलहरू: १००, ,००, वा mg०० मिलीग्राम प्रति क्याप्सूल
तरल: २ mg० मिलीग्राम प्रति mill मिलिलिटर (मिली) मौखिक तरल
वयस्कहरूको लागि ग्याबापेंटिन खुराक
वयस्कहरूको लागि, gabapentin खुराक उपचार गरिएको अवस्थाको आधारमा व्यापक रूपमा फरक हुन सक्छ। गाबापेन्टिनको साथ उपचार सुरु गरेपछि सुरू खुराक प्रति दिन १०० देखि mg०० मिग्रि हुन सक्छ र प्रभावकारी खुराक नपुगुन्जेल स्थिर रूपमा बढ्न सक्छ। अधिकतम खुराक उपचार भइरहेको अवस्थामा निर्भर गर्दछ।
वयस्कहरूको लागि मानक gabapentin खुराक: 300-600 मिलीग्राम प्रति दिन तीन पटक लिन्छ।
वयस्कहरूको लागि अधिकतम gabapentin खुराक: अधिकतम दैनिक डोज 36 36०० मिलीग्रामको लागि १२०० मिलीग्राम प्रति दिन तीन पटक लिइन्छ।
बच्चाहरूको लागि ग्याबापेंटिन खुराक
Ap बर्ष वा माथि उमेरका बच्चाहरूमा आंशिक दौरा लागि गौण उपचारको रूपमा गबापान्टिन स्वीकृत हुन्छ मिर्गी । कुनै पनि अन्य चिकित्सा अवस्थाको लागि बच्चाहरूमा ग्याबापेंटिनको प्रयोग एफडीए-अनुमोदित छैन। खुराक बच्चाको उमेर र वजन दुबै द्वारा निर्धारित गरिनेछ।
Ap बर्ष भन्दा बढी बच्चाहरु को लागी उमेर बाट गैबापेंटिन खुराक
आयु (वर्ष) सिफारिश गरिएको खुराक
Y-। वर्ष Mg० मिलीग्राम प्रति किलोग्राम (१.2.२ मिलीग्राम / एलबी) शरीरको वजन तीन खुराकमा विभाजित
अधिकतम: दैनिक वजनको kg० मिलीग्राम (२२..7 मिलीग्राम / lb) शरीरको वजन
-11-११ yrs २०--35 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम (.1 .१-१-15. mg मिलीग्राम / एलबी) शरीरको वजन तीन खुराकमा विभाजित
१२ वर्ष वा सो भन्दा पुरानो 300-600 मिलीग्राम प्रति दिन तीन पटक लिन्छ
अधिकतम: day 36०० मिलीग्राम प्रति दिन
गाबापेन्टिन खुराक चार्ट
१२ बर्ष र अधिक उमेर 300-600 मिलीग्राम प्रति दिन तीन पटक Day 36०० मिलीग्राम प्रति दिन
-11-११ बर्ष २ day--35 मिलीग्राम / किलोग्राम (११..4-१-15..9 मिलीग्राम / एलबी) प्रति दिन तीन दैनिक खुराकमा विभाजन Mg० मिलीग्राम / किलोग्राम (२२..7 मिलीग्राम / एलबी) प्रति दिन
Years-। वर्ष Mg० मिलीग्राम / किलोग्राम (१.2.२ मिलीग्राम / एलबी) प्रति दिन तीन दैनिक खुराकमा विभाजित Mg० मिलीग्राम / किलोग्राम (२२..7 मिलीग्राम / एलबी) प्रति दिन
Postherpetic न्युरल्जिया १ 18 बर्ष र माथिको दिन १ मा mg०० मिलीग्राम, २ दिन मा दुई पटक दैनिक २ mg० मिलीग्राम, तब 3०० मिलीग्राम तीन पटक दैनिक दिन मा on; दिन पछि3देखि mg०० मिलीग्राम प्रति दिन तीन पटक पछि खुराक बढाउन सकिन्छ १ 18०० मिलीग्राम प्रति दिन
मधुमेह परिधीय न्यूरोपैथी १ 18 बर्ष र माथिको -12००-१२०० मिलीग्राम प्रति दिन तीन पटक (अफ-लेबल) Day 36०० मिलीग्राम प्रति दिन
फाइब्रोमायाल्जिया १ 18 बर्ष र माथिको Mg०० मिलीग्राम दैनिक दुई पटक र १२०० मिग्रि सुत्ने समयमा (अफ-लेबल) २ day०० मिलीग्राम प्रति दिन
रक्सी निर्भरता १ 18 बर्ष र माथिको 300-600 मिलीग्राम प्रति दिन तीन पटक (अफ लेबल) १ 18०० मिलीग्राम प्रति दिन
आंशिक दौराको लागि गाबापेंटिन खुराक
वयस्क र children बर्ष वा माथिका बच्चाहरूमा आंशिक दौर्ताको लागि सहायक गाभ्याप्टिन एफडीए अनुमोदित छ।
वयस्कहरूको लागि मानक gabapentin खुराक: 300 देखि 600 मिलीग्राम दिनको तीन पटक मुखबाट।
वयस्कहरूको लागि अधिकतम gabapentin खुराक: Divided 36०० मिलीग्राम दैनिक तीन विभाजित खुराकमा।
बिरामी बिरामीहरू (मिर्गौला रोग) - खुराक रकम आवृत्ति समायोजन :
30-59 मिली / मिनेट: 200 बाट 700 मिलीग्राम प्रति दिन दुई पटक क्रिएटिनिन निकासी
दिनको एक पटक १ m-२ min मिलि / मिनेट: २०० बाट mg०० मिग्रि को क्रिएटिनिन निकासी
१ 15 मिलि / मिनेट वा सोभन्दा कमको क्रिएटिनिन निकासी: दिनको एक पटक १०० देखि mg०० मिलीग्राम क्रिएटिनिन क्लियरन्समा प्रत्येक कमीको लागि आनुपातिक (१/१ per प्रति पूर्ण संख्या मान) घट्यो
हेमोडायलिसिस: खुराक अनुमानित क्रिएटिनिन क्लियरेंसमा निर्भर हुन्छ; डायलिसिस पछि १२ 125 देखि 350 350० मिलीग्रामको पूरक खुराक दिइन्छ
दादाका कारण स्नायु दुखाइको लागि गाबापेन्टिन खुराक (पोस्टहेर्पेटिक न्यूरलगिया)
गाबापेन्टिन एफडीएलाई पोस्टहेर्पेटिक न्यूरलगियाको उपचार गर्न अनुमोदित छ, जुन दाँत (हर्पेस जोस्टर) को कारण न्यूरोपेथिक दुखाइ हो।
वयस्कहरूको लागि अधिकतम gabapentin खुराक: १ divided०० मिलीग्राम दैनिक तीन विभाजित खुराकहरूमा।
बिरामी बिरामीहरू (मिर्गौला रोग): माथि वृक्क बिरामी बिरामीहरूका लागि खुराक हेर्नुहोस्
न्यूरोपैथिक पीडाको लागि गाबापेन्टिन डोज
तंत्रिका क्षति (न्यूरोपैथी), कम्प्रेसन, वा जलनको कारण तंत्रिका दुखाइ (न्यूरोल्जिया) को उपचारको लागि गाबापेंटिनलाई प्राय: बन्द लेबलको रूपमा सिफारिश गरिन्छ।
वयस्कहरूको लागि मानक gabapentin खुराक: To०० देखि १२०० मिलीग्राम दिनको तीन पटक मुखबाट।
फाइब्रोमाइल्जियाको लागि ग्याबापेंटिन खुराक
थकान कम गर्न, पीडाबाट राहत प्रदान गर्न, र फाइब्रोमाइल्जियाका बिरामीहरूको निद्रा सुधार गर्न गाबापेंटिनलाई अफ-लेबलको प्रयोग गरिन्छ।
वयस्कहरूको लागि मानक gabapentin खुराक: 600 मिलीग्राम दैनिक दुई पटक र 1200 मिलीग्राम सुत्ने समयमा।
वयस्कहरूको लागि अधिकतम gabapentin खुराक: २ 24०० मिलीग्राम दैनिक।
मदिरा निर्भरताका लागि गाबापेंटिन खुराक
गाबापेन्टिन हो व्यापक रूपमा अफ-लेबल प्रयोग गरियो अनिद्रा र लोभ को कम गर्न को लागी रक्सी को उपयोग विकार को लागी, विशेष गरी ती मदिरा परहेज को मर्मत चरण मा।
घरपालुवा जनावरहरूको लागि ग्याबापेंटिन खुराक
तपाईंले जनावरहरूलाई गाबापेन्टिन दिनु हुँदैन जबसम्म एक पशुचिकित्सकले पशुलाई गाबापेन्टिनको लागि सल्लाह दिदैन। पशुचिकित्सकहरूले बारम्बार गाबापेंटिन लिन्छन् घरपालुवा जनावर र ठूला जनावरहरूमा दौरा वा पुरानो स्नायु दुखाइको उपचार गर्न। सिफारिस गरिएको खुराक प्रति १२ किलोग्राम शरीरको वजन (२.3--4. mg मिलीग्राम / एलबी) को 5-१० मिलीग्राम हो, तर खुराक पशुचिकित्सकहरूको बिच फरक हुनेछ। गैबापेंटिन खुराक प्रति किलोग्राम to देखि ११ मिलीग्राम (१.4 देखि mg मिलीग्राम प्रति पाउण्ड) एक एनाल्जेसिकको रूपमा १० देखि mg० मिलीग्राम प्रति किलोग्राम (4.5. to देखि १.6. per प्रति पाउण्ड) एन्टिकोनभल्सेन्टको रूपमा भिन्न हुन सक्छ। व्यक्तिहरूको रूपमा, खुराक सानो सुरु हुन सक्छ र प्रभावकारी खुराक नपुगुन्जेल स्थिर रूपमा बढ्न सक्छ।
कसरी gabapentin लिने
ग्याभ्याप्टिन दिनहुँ तीन पटक मुखले लिन्छ। विशेष परिस्थितिमा जस्तै, जब औषधि पहिलो पटक सुरु हुन्छ वा मृगौला समस्या भएका बिरामीहरूमा, ग्याबापेंटिन कम बारम्बार लिइन्छ।
निर्देशन अनुसार तपाईंको औषधि लिनुहोस्। सबैभन्दा प्रभावकारी खुराक रकम नपुगेसम्म खुराक परिवर्तन हुन सक्छ।
यदि तपाईलाई मिर्गी छ भने, १२ घण्टा भन्दा बढि खुराक बीचमा अनुमति नदिनुहोस्।
गाबापेन्टिन खानेकुराको साथ वा बिना लिन सकिन्छ।
एक गिलास पानीको साथ सम्पूर्ण ट्याब्लेट निल्नुहोस्। क्रस, भाँच्नुहोस्, वा च्यु नगर्नुहोस्।
यदि तपाईं ट्याब्लेटलाई दुई टुक्रा पार्नुहुन्छ भने, अर्को आधा तपाईंको अर्को खुराकको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। २ un दिन पछि कुनै पनि प्रयोग नगरिएको आधा ट्याब्लेट खारेज गर्नुहोस्।
पानीको गिलासले सम्पूर्ण क्याप्सुल निल्नुहोस्। खोल्नुहोस्, क्रस गर्नुहोस्, वा च्यु नगर्नुहोस्।
यदि क्याप्सुल निल्न गाह्रो छ भने, बिरामी वा हेरचाहकर्ताले ध्यानपूर्वक क्याप्सूल खोल्न सक्छन् र सामग्रीहरू एक सानो कप पानी, जुस, वा स्यालो सॉसमा छिचोल्न सक्छन् र यसरी डोज दिनुहोस्।
सिरिंज वा औषधि कपको साथ मौखिक तरल पदार्थ नाप्नुहोस् जुन मिलीमिटर मार्किंगहरू छन्। गाबापेन्टिन मौखिक निलंबन सामान्यतया १२ मिलि डोजिंग सिरिंजको साथ आउँदछ।
बन्द बोतल प्रत्येक प्रयोग अघि राम्रोसँग हल्लाउनुहोस्।
बोतलबाट बच्चा-प्रमाण टोपी हटाउनुहोस्।
निश्चित गर्नुहोस् कि सिरिंज एडाप्टरलाई बोतल खोल्नमा धकेलीयो। यदि होईन भने सिट्रिge एडाप्टरलाई बोतल खोल्न पूर्ण रूपमा घुसाउनुहोस्।
सिरिंज प्लन्गरलाई सबै तरिकाबाट टिपमा पुश गर्नुहोस्।
एड्याप्टरमा सिरिंज टिप घुसाउनुहोस्।
बोतललाई बदल्नुहोस् र सिरिgeलाई माथि तल सार्नुहोस्।
बिस्तारै सही मिलीलीटर मार्कमा पर्याप्त तरल कोर्नुहोस्।
बोतललाई पछाडि ठाडो स्थितिमा फर्काउनुहोस्।
सिरिन्ज हटाउनुहोस् र मुखमा टिप राख्नुहोस्।
बिस्तारै मुखमा खाली सामग्री र निगल।
सुरक्षित रूपमा शिशु-सुरक्षा क्यापलाई बोतलमा सुरक्षित गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ गाबापेन्टिनको एक खुराक याद गर्नुहुन्छ भने, छिटो खुराक लिनुहोस् जति सक्दो तपाईंलाई याद छ। यसको निर्धारित समयमा अर्को खुराक लिनुहोस्। यदि यो अर्को खुराकको लागि लगभग समय हो भने, छुटेको खुराक छोड्नुहोस् र निर्धारित समयमा अर्को खुराक लिनुहोस्। छुटेको खुराकको लागि अतिरिक्त औषधी नलगाउनुहोस्।
यदि तपाइँ दौराको लागि gabapentin लिदै हुनुहुन्छ, तपाइँको डाक्टर वा फार्मासिष्टलाई एक छुटेको खुराक कसरी ह्यान्डल गर्ने निर्देशनहरूको लागि सोध्नुहोस्।
जब gabapentin, तपाईं निम्न सुरक्षा र प्रभावकारिता सल्लाह विचार गर्न सक्नुहुन्छ:
Gabapentin लिनु अघि, कृपया यसको साथ आउँदो मेडिसिन गाइड पढ्नुहोस्। एक कापीको लागि तपाईंको फार्मासिस्टलाई सोध्नुहोस् यदि तपाईंसँग छैन भने।
कोठाको तापक्रममा बन्द कन्टेनरमा औषधि भण्डारण गर्नुहोस् (।।)˚-86एफ), गर्मी, नमी र सीधा प्रकाशबाट टाढा।
फ्रिजमा मौखिक तरल भण्डार गर्नुहोस् (। 36)˚-46एफ)। समाधान स्थिर नगर्नुहोस्।
जब सम्म एक डाक्टर द्वारा निर्देशित, Gabapentin रक्सी वा औषधि संग सेवन नगर्नुहोस् जो तन्द्रा पैदा गर्दछ।
यदि तपाईं एन्ट्यासिड युक्त एल्युमिनियम वा म्याग्नेशियम, जस्तै मालोक्स, मायलान्टा, वा गेभिसकुन लिनुहुन्छ भने, ग्याबापेन्टिन खुराक लिनु अघि कम्तिमा दुई घण्टा कुर्नुहोस्।
जब एक तरलको रूपमा gabapentin लिनुहुन्छ, सही मापन गर्न औषधीले प्रदान गरिएको मिटरि sy सिरिंज वा कपको प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईंले सिरिंज वा कप हराउनुभयो भने, तपाईंको फार्मेसीले कुनै मूल्य बिना प्रतिस्थापन प्रदान गर्न सक्दछ।
आपतकालमा जब तपाईं हराएको मापन उपकरण प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्न, तपाईं अस्थायी रूपमा gabapentin मौखिक निलम्बन को एक खुराक लिन एक भान्छा मापन चम्चा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर कहिले तपाईं संग खाने वा एक मापन कप चम्मच प्रयोग गर्दैन। एउटा पूर्ण चम्मच तरलको m मिलीलीटर बराबर हुन्छ। एक पूर्ण चम्मच तरल को १ 15 मिलि बराबर।
यदि तपाईं मौखिक तरल पदार्थ लिइरहनुभएको छ भने, फार्मासिस्टलाई सहि मिलिलीटर खुराक सोध्नुहोस्।
प्रत्येक खुराकको लागि, डायरीमा समय रेकर्ड गर्नुहोस् वा निश्चित गर्नुहोस् कि अर्को खुराक एकदम चाँडो वा ढिलो दिइएको छैन।
यदि gabapentin ले एक पेट पेट को कारण हुन्छ, यो खाना संग लिन कोशिस गर्नुहोस्।
यदि स्तनपान गराइरहनुभएको छ भने, gabapentin लिने बारेमा तपाईंको डाक्टरलाई सोध्नुहोस्।
गाबापेन्टिनले तपाईंको सोचाइ कम गर्न, समन्वय कम गर्न, र तन्द्रा उत्पन्न गर्न सक्छ, त्यसैले ड्राइभ नगर्नुहोस्, मेसिनरी सञ्चालन गर्नुहोस्, वा खतरनाक गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुहुन्न यदि तपाईं थकित, चक्कर, वा ढिलो महसुस गर्नुहुन्छ भने।
गाबापेन्टिन खुराक FAQ हरू
यसले काम गर्न कत्तिको समय लिन्छ?
Gabapentin को सुरू खुराक कम हुनेछ। खुराक रकम र आवृत्ति प्रत्येक दिन स्थिर वृद्धि हुने छ जब सम्म एक प्रभावकारी खुराक नपुगुन्जेल, यो प्रक्रियालाई टाइटेसन भनिन्छ। प्रायः सर्तहरूको लागि, यसले सामान्यतया एकदेखि दुई हप्ता लिन सक्दछ सुरूवाती खुराक पछि ग्याबापेंटिनको प्रभावहरू याद गर्न।
तपाईंको प्रणालीमा gabapentin कहिले सम्म रहन्छ?
स्वस्थ मिर्गौला भएका व्यक्तिहरूका लागि, ग्याबापेंटिन सामान्यतया हरेक आठ घण्टामा लिन्छन्। प्रत्येक खुराक दुई तीन घण्टामा शरीरमा यसको अधिकतम एकाग्रतामा पुग्छ।
मिर्गौलाले शरीरबाट gabapentin द्रुत रूपमा खाली गर्दछ। दर gabapentin ले शरीर खाली गर्दछ जुन यसको आधा जीवन द्वारा मापन गरिएको छ, जुन शरीरमा आधा gabapentin खाली गर्न शरीरलाई लाग्ने समयको मात्रा हो। बच्चाहरूमा gabapentin को आधा जीवन को बारे मा पाँच घण्टा छ। वयस्कहरूमा, gabapentin को आधा जीवन पाँच देखि सात घण्टा छ।
4 दिन पछि योजना बी काम गर्दछ
किनभने gabapentin मिर्गौला द्वारा खाली छ, औषधी बिग्रेको गुर्दा समारोह संग बिरामीहरुमा प्रणाली मा रहन्छ। दुबै खुराक रकम र खुराक फ्रिक्वेन्सी निर्धारित चिकित्सकद्वारा समायोजित हुन आवश्यक पर्दछ।
के हुन्छ यदि मैले गाबापेंटिनको एक खुराक याद गरे?
यदि तपाइँ गाबापेन्टिनको एक खुराक याद गर्नुहुन्छ भने, छिटो खुराक लिनुहोस् जति सक्दो तपाईंलाई याद छ। यसको निर्धारित समयमा अर्को खुराक लिनुहोस्। यदि यो अर्को खुराकको लागि लगभग समय हो भने, छुटेको खुराक छोड्नुहोस् र निर्धारित समयमा अर्को खुराक लिनुहोस्। छुटेको खुराकको लागि अतिरिक्त औषधी नलगाउनुहोस्। यदि तपाइँ दौराको लागि gabapentin लिदै हुनुहुन्छ, तपाइँको डाक्टर, फार्मासिष्ट, वा अन्य स्वास्थ्यसेवा पेशेवरहरु लाई छुटेको खुराक को उपयोग गर्नका लागि सोध्नुहोस्। मिर्गीका बिरामीहरूमा १२ घण्टा भन्दा बढि डोज हराउनु पर्दा जोखिम बढ्छ।
म कसरी ग्याबापेंटिन लिन रोक्न सक्छु?
एक चिकित्सक द्वारा निर्देशित नगरे सम्म Gabapentin रोक्न हुँदैन। रोगीहरूले फिर्ती लक्षणहरू अनुभव गर्न सक्छन्, जस्तै आन्दोलन, चिन्ता, बेचैनी, मतली, र फ्लू जस्तो लक्षण, यदि गाबाप्यान्टिन अचानक छ हप्ता भन्दा लामो लिए पछि यो अचानक बन्द गरीन्छ भने। यदि gabapentin दौरा रोकथाम लिईदै छ, अचानक औषधी को विच्छेदन गम्भीर चोट लाग्न सक्छ। जब यो gabapentin लिन रोक्न को लागी, तपाइँको डाक्टर बिस्तारै सात दिन को लागी तपाइँको खुराक टेप गर्न सक्छ।
यदि तपाईंले मूड वा व्यवहार परिवर्तनहरू, आत्मघाती विचारहरू, सास फेर्न समस्या, वा एक अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रिया जस्तै पित्ती, सास फेर्न ग्लानि, सुन्नि ग्रन्थि, वा ज्वरो जस्ता गम्भीर साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्नुभयो भने तत्काल मेडिकल ध्यान खोज्नुहोस्।
Gabapentin को सट्टा के प्रयोग गर्न सकिन्छ?
साइड इफेक्ट, चिकित्सा अवस्था वा अन्य कारणहरूको कारण, gabapentin सबैका लागि ठीक नहुन सक्छ। शुभ समाचार यो छ कि त्यहाँ ग्याबापेंटिनले उपचार गर्ने प्रायः सर्तहरूको वैकल्पिक र प्रभावकारी औषधीहरू छन्। यी औषधीहरूले एन्टिकोनभल्सेन्ट्स, एनाल्जेसिक्स, ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसन्ट्स, सेलेक्टिभ सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर (एसएसआरआई) समावेश गर्दछ। सिम्बल्टा ( duloxetine ), र छनौट सेरोटोनिन र norepinephrine reuptake इनहिबिटरहरू (SNRIs) जस्तै सवेला (milnacipran)।
Gabapentin को लागी अधिकतम खुराक के हो?
Gabapentin को लागि अधिकतम खुराक उपचार भइरहेको अवस्थामा निर्भर गर्दछ। धेरै जसो सर्तहरूको लागि, यो अधिकतम २,4०० मिलिग्राम र 6,00०० मिलीग्राम प्रति दिनको बीचमा हुन्छ।
Gabapentin संग के कुराकानी गर्छ?
खानाले gabapentin को जैव उपलब्धता वा प्रभावकारितालाई असर गर्दैन। जे होस्, यदि गाबापेन्टिनले पेटको असर, कब्ज, वा पखाला जस्ता साइड इफेक्टहरू निम्त्याउँदैछ भने, खानामा परिवर्तनहरू आवश्यक हुन सक्दछ।
किनभने gabapentin मस्तिष्कमा गतिविधि धीमा गर्दछ, यसले केहि साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ, जस्तै उनी निन्द्रा, चक्कर आउँछ, बेहोरा, somnolence, र बिग्रेको समन्वय (ataxia)। गाबापेन्टिनले समान पदार्थ वा ड्रग्ससँग अन्तर्क्रिया गर्दछ जुन केन्द्रीय स्नायु प्रणालीलाई उदास बनाउँछ, जस्तै मदिरा, क्यानाबिनोइड्स, शामक, एन्टीहिस्टामाइन्स, चिन्ता लाग्ने औषधि, ओपियोइड्स, र अन्य एन्टिपाइल्टिक ड्रग्स। यी सबै औषधिहरू पूर्ण रूपमा रोक्न हुँदैन, तर तिनीहरूको प्रयोगलाई तपाईंको चिकित्सकले परिमार्जन गर्न सक्दछ। जब गाबापेन्टिन यी कुनै पनि औषधिसहित लिईन्छ, बिरामीहरूले औषधी खानबाट जोगिनु पर्छ वा सवारी चलाउँदा, मेशिनरी चलाउँदा, वा सम्भावित खतरनाक गतिविधिहरूमा संलग्न हुँदा सावधान हुनुपर्छ।
बिरामीहरूले पनि एन्टासिडहरू लिदा सावधानी अपनाउनु पर्छ जसमा एल्युमिनियम वा म्याग्नेशियम लवण हुन्छ। एल्युमिनियम र म्याग्नीशियमले शरीरमा गाबापेन्टिनको एकाग्रता घटाउन सक्छ, जसले औषधीको प्रभावकारिता कम गर्न सक्छ। सामान्य नियमको रूपमा, gabapentin को एक खुराक लिनु अघि एन्टासिड लिई कम्तिमा दुई घण्टा कुर्नुहोस्।
गाबापेन्टिन , Epocrates
गाबापेन्टिन , औषधि राष्ट्रिय पुस्तकालय
गाबापेन्टिन , StatPearls
दीर्घकालीन पीडाको लागि गाबापेन्टिन र एमान्ट्याडाइन: के तपाईको खुराक सहि छ? आजको पशु चिकित्सा अभ्यास
न्युरोन्टीन एफडीए जानकारी तोक्दै , एफडीए
न्युरोन्टिन औषधि गाइड , फाइजर
RSV का लागि अभिभावकको गाईड
म कसरी छिटो मेरो रक्तचाप घटाउन सक्छु?
महिलाहरु मा खमीर संक्रमण को लागी घरेलु उपचार
के यो रक्सी संग ibuprofen ले नराम्रो छ?
पछिल्लो के हो तपाइँ योजना बी लिन सक्नुहुन्छ
किन मधुमेह रोगीहरु कोसिस नगरी तौल घटाउँछन्?
खतरनाक उच्च क्रिएटिनिन स्तर के हो?
तपाइँ कति पटक ibuprofen 800mg लिनुहुन्छ?